Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEduard
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwindlu enembali kwidolophana yaseGreifenstein. Iflethi okanye indlu ekwicomplex ilala abantu abayi-2 ukuya kwabayi-4 ibe inazo zonke izinto ozidingayo ukuze uhlale kamnandi. Inegumbi lokuhlambela elahlukileyo elineshawa. Inekhitshi elipheleleyo elineoveni, i-microwave, i-toaster, into yokupheka amanzi, iithempleyithi ezishushu, ifriji nomatshini wokuhlamba izitya.
I-Vienna ikude ngeekhilomitha eziyi-20 (iimayile eziyi-12,5) (imizuzu eyi-25 ngemoto, okanye kwimizuzu eyi-20 ngololiwe). Isikhululo sikumgama wemizuzu eyi-5 nje wokuba ungahamba ngeenyawo.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex iye yalungiswa ngo-2016, inendawo yayo yokuhlambela nekhitshi elinento yonke. Ikwisikrini esikhulu seTV esine-satellite. Iinkqubo zesiNgesi ziyafumaneka.
Kukho ikofu yasimahla kunye neentlobo ezahlukeneyo zeti ezifumanekayo egumbini, ezinokutyiwa simahla.
Le ndlu ikufutshane kakhulu nechibi iGreifenstein, ichibi elithandwayo lemidlalo yokuqubha namanzi. Ifudumele ngokwaneleyo ukuqubha ukususela ngoMeyi de kube ngasekupheleni kukaSeptemba. Indawo yokuqesha isikhephe iyafumaneka kufutshane nase. Ukhenketho lweebhayisekile kwiindlela zebhayisekile ezidumileyo zeDanube, unokuqesha iibhayisekile kwisikhululo setreyini, esinomgama wemizuzu eyi-5 yokuhamba ngeenyawo.
Sineefestile ezikhuselwe ngengxolo kunye nenkqubo yokukhupha umoya ngokuzenzekelayo, ngoko iifestile zinokuhlala zivaliwe ukuze uthi zava.
Ukuba uhamba ngebhayisekile, sinikezela ngendawo yokugcina simahla iibhayisekile kwigumbi elahlukileyo, elitshixwayo ngaphakathi endlini.
IGreifenstein ikwindawo ekhethekileyo. Apha kulapho ukwandiswa komntla we-Alps kunye namahlathi aseVienna kudibana khona nomlambo iDanube. Ngaphambi nje kwendlu (umgama: 100m), uza kufumana ichibi laseGreifenstein, elenziwe kwisebe elisecaleni leDanube xa kwakhiwa idama laseColumbiaelectric. Idume kakhulu ngokuqubha ngexesha lasehlotyeni. Ukuqubha kudla ngokubakho ukususela ngoMeyi de kube ngasekupheleni kukaSeptemba. Kukho nesikhephe esiqeshisayo echibini.
Umzila webhayisekile odumileyo waseDanube ukhokelela kunxweme lwechibi. Ingasetyenziselwa ukuhamba ngebhayisekile ukuya eVienna okanye eTulln, okanye ukuya kummandla weWaleu (indawo yelifa lemveli lehlabathi, malunga neekhilomitha eziyi-40 ukunyuka). Ukuba uyakuthanda ukuhamba ngemidlalo, ungajikeleza uye kwidolophana yaseHadersfeld. Le ndlela isetyenziswa ngabakhweli beebhayisekile bengingqi ukuze iqeqeshwe entabeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Eduard
Sihlala kwindlu enye, ngoko ukuba unayo nayiphi na imibuzo sinokuyenza ngoko nangoko. Siyakuvuyela ukukunika amacebiso ngezinto ezenziwayo kule ngingqi. Ukuba ufuna amatikiti okanye ufuna ukuceba into eVienna, siyakuvuyela ukukunceda ngalo lonke ixesha.
Sihlala kwindlu enye, ngoko ukuba unayo nayiphi na imibuzo sinokuyenza ngoko nangoko. Siyakuvuyela ukukunika amacebiso ngezinto ezenziwayo kule ngingqi. Ukuba ufuna amatikiti okany…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Greifenstein